Home News Farah Macalin oo isku dayay in uu Dallaalo Qalbi Dhagax! Ceeb iyo...
Farah Macalin oo isku dayay in uu Dallaalo Qalbi Dhagax! Ceeb iyo wajigabax kala kulmay!
Farah Macalalin oo wakiil ka ah MW Farmaajo ayaa waxaa uu isku dayay in uu dalaal ka noqdo dowlada Farmaajo. Waxaa uu habeenkii xalay ahaa uu Farah Macalin uu kulan qarsoodi ah la qaatay Korneel Cabdikarin Qalbi Dhagax, kulankaas ayuu ugu sheegay Qalbi Dhagax in MW Farmaajo doonayo in uu la heshiiyo Qalbi Dhagax.
Farmaajo ayaa balan qaaday in uu bixinaayo lacag dhaw $2 Milyan oo magdhow ah. Qalbdi Dhagax oo ah shaqsi ay aad ugu wayntahay qadiyada ayaa aad ugu carooday hadalkii Farah Macalin. Waxa uu yiri “ Farah aniga iyo adiga wax badan nagama dhaxeeyaan, Waxaana ii Muuqata in aadanba I aqoonin, Ma ihi kuwa la iibsan karo” “Una sheeg kan ku soo diray ee Farmaajo meel xun yaad ka bilaawday talada, walaahi baan ku dhaartay in aanan qadiyada Soomaalinimo iibsanaynin Inta noslosheeyda ka hartay” Waxa uu ku daray “ 2 Milyan ayaad sheegaysaaye $100 Milyan ma siisanayo karaamada iyo sharafka umadda Soomaaliyeed ee Sida Soomaalinimada ah iigu hiiliyay”
Farah macalin ayaa waji gabax kala kulmay kulankii gaarka ah ee uu la qaatay Qalbi Dhagax. Waxaa nasiib xumo ah in Farmaajo lagula taliyay jn hatidii umadda Soomaaliyeed in Qalbi Dhagax ku iibsado! Soomaali ayaa ay u taalaa sidii ay Farmaajo ula xisaabtami lahaayeen.
Previous articleSAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo booqday Magaalada Carta
Next articleSoomaaliya oo laga yaabo Sandkan in laga aadin Xajka (Akhri Sababta)
Gaari Laga Soo Buuxiyay Waxyaabaha Qarxa oo Lasoo Dhigay Isgooyska Km4